ယနေ့တနိုင်ငံ လုံး ပျံ့နှံ့နေ တဲ့ ကိုဗစ် ကို ထိန်းနိုင် ဖို့ အကောင်းဆုံး နည်း လမ်း – Shwe Ba
ယနေ့တနိုင်ငံ လုံး ပျံ့နှံ့နေ တဲ့ ကိုဗစ် ကို ထိန်းနိုင် ဖို့ အကောင်းဆုံး နည်း လမ်း
နေ့စဉ် ၁၀၀-၂၀၀ ကြား ထိန်းနိုင်ရင် အခြေအနေ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အားလုံးမပိတ်ဘဲ အဲ့လောက်မှာ ထိန်းနိုင်တယ်ဆို အရမ်းအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ၃၀၀-၄၀၀ ကြားဆိုတာ သွေးလန့်ရမယ့် အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာမှ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မပိတ်ဘဲ အဲ့လောက်မှာ နေနိုင်ရင် အောင်မြင်ပါတယ်။
ကြောက်တဲ့သူများ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆင်ခြင်ပါ။ မထွက်မဖြစ် မလုပ်မဖြစ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့။ သင်တို့ နေ့စဉ်စားနေတဲ့ အစားအစာတွေ သင်တို့ဆီရောက်အောင် လုပ်ပေးနေသူမရှိဘဲ ပိုက်ဆံရှိရင်တောင် နေ့စဉ် ဘယ်သူမှ စားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကြောက်ရင် ဆင်ခြင်ရမယ့် နည်းလမ်းတွေထဲ အရေးအကြီးဆုံးက ဘာလဲ? Social Distancing ပါပဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဘယ်သူ့နားမှ မကပ်ပါနဲ့ ဝေးဝေးကသာ စကားပြောပါ။ လူထူရင်မသွားပါနဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် အိမ်က လုပ်ပါ၊ ဖုန်းနဲ့လုပ်ပါ၊ အင်တာနက်ပေါ်ကလုပ်ပါ။
ဒုတိယက နှာခေါင်းကို မပွတ်ဖို့ သတိထားဖို့ပါ။ တုတ်ကွေးအများစုဟာ နှာခေါင်းကို ပွတ်ရာက စတာချည်းပါပဲ။ ယားမယ် ပွတ်မယ် အဲ့ကနေ နှာတွေပူ မျက်လုံးတွေ ပူလာမယ်။ ဒီတော့ ယားရင် တစ်သျှူးအသစ်နဲ့ အသာအယာသုတ်ပါ လက်ဗလာနဲ့ မနှိုက် မပွတ်ပါနဲ့။ လူကြီးတွေမှာ နှာခေါင်းယားတတ်ရင် နှာခေါင်းထဲက အမွှေး အရမ်းရှည်ပြီး နံရံထောက်တာ အပြင်ထွက်နေတာကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်၊ နည်းနည်းညှပ်ပေးပါ။
လူအများအတင်းလုပ်ခိုင်းနေတဲ့ Mask ဟာ အရေးအကြီးဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အကြောင်းအများကြီးပါ
၁၊ Mask တပ်ပုံ ချွတ်ပုံ မှန်ဖို့လိုတာပါ၊ တပ်တဲ့အခါမှာ နှာခေါင်းပြားကို စိနေအောင်ဖိဖို့လိုပြီး သူ့ကနေ လေမဝင်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့လိုဖြစ်ဖို့က နှာခေါင်းပြားကောင်းဖို့ လိုသလို နားသိုင်းကြိုး အရမ်းချောင်နေလို့မရပါဘူး။ Mask ရဲ့သဘောတရားက အမြဲတပ်ပြီး ချွတ်တာနဲ့ ပစ်ရတာမျိုးပါ။ လျှော်သုံးလို့ရတဲ့ Mask ဆို ချွတ်တာနဲ့ ဆပ်ပြာရည်ထဲ တန်းထည့်ရမှာပါ။
တပ်ထားတုန်းမှာ မေးစေ့ဆွဲချထားလို့မရသလို Mask ရဲ့ နားသိုင်းကြိုးက မကိုင်ဘဲ အရှေ့ကကိုင်ပြီး ဆွဲချလိုက် ပြန်တင်လိုက် လုပ်လို့လဲ မရပါဘူး။ ဘယ်လိုဖြုတ်မလဲဆို နားသိုင်းကြိုးကိုပဲ ကိုင်ဖြုတ်ရပါမယ်။ တခြားနေရာတွေကို လုံးဝမထိရပါ။ ဒီတော့ လုံးဝမနေနိုင်လို့ ခဏဖြုတ်ချင်ရင် မေးစေ့ဆွဲမချပါနဲ့ နားသိုင်းကြိုးကဖြုတ်ပြီး အသာ ကိုင်ထားပါ။ Mask အတွင်းပိုင်းကို သူများရဲ့ လေတွေ တတ်နိုင်သလောက်မထိအောင်ထားပါ။
၂၊ Mask ရဲ့ ကွာလတီပါ။ဘယ်လိုကွာလတီသုံးလဲပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်လောက်နီးရင် ကာနိုင်မလဲဆိုတာ မတူပါဘူး။ N95 ကို သေချာတပ်ထားရင် ကပ်ပြီး ချောင်းဆိုးတာတောင် ကာနိုင်ပေမယ့် ထွင်းဖေါက်မြင်တဲ့ တစ်လွှာ နှစ်လွှာတွေဆို ၃ ပေ တောင် ကာနိုင်ပါ့မလား မသေချာပါ။
၃၊ Mask ကြာကြာတပ်နိုင်ချိန်ပါ၊ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူသလို ရာသီဥတုပူရင်လဲ အမြဲတပ်ထားဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ တပ်ဖူးသူတိုင်းသိတဲ့ ကိစ္စပါ။ မခံနိုင်ရင် ချွတ်လိုက် တပ်လိုက် လုပ်နေတာနဲ့ အပြည့်အဝမလုံတဲ့အပြင် ပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်။
၄၊ Mask ကုန်ကျစရိတ်ပါ။ တစ်ရက်နှစ်ရက်မသိသာပေမယ့် ကွာလတီကောင်းသုံးမယ်ဆို တစ်နေ့ တစ်ခုတောင် ရေရှည်မလွယ်ပါဘူး။ဒီအချက်တွေကြောင့် မကူးချင်ရင် Mask ထက်ပိုလုပ်လို့လွယ်တာ အပေါ်က ၂ ချက်ပါ။ အဲ့ ၂ ချက်ကို မရှောင်နိုင်ပဲ လုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင် Mask ကိုသုံးပါ။နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ လက်ဆေးတာပါ။ လက်ဆေးတာထက် တတ်နိုင်သလောက် လူအများသုံးပစ္စည်းတွေ မကိုင်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နေရောင်ရတဲ့နေရာထက် နေရောင်မထိတဲ့နေရာတွေ အဲကွန်းခန်းထဲက ပစ္စည်းတွေကို သတိထားပါ။
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ စားဝတ်နေရေးအတွက် လူတွေ အလုပ်လုပ်နေဖို့လိုပါတယ်။ သင်ဝယ်နိုင်ရင်တောင် ဝယ်စရာပစ္စည်း သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမရှိတော့ရင်၊ ထွက်တဲ့နေရာက သင့်ဆီပို့ပေးမယ့်သူ မရှိတော့ရင် ဒုက္ခများမှာပါ။ဒီသဘောလေးကို နားလည်ရင် လူတွေ ကိုဗစ်နဲ့ မျှတစွါ ယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်မှာပါ။ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းအရ ကြောက်တတ်သူရော မကြောက်တတ်သူရော အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ
နစေ့ဉျ ၁၀၀-၂၀၀ ကွား ထိနျးနိုငျရငျ အခွအေနေ အရမျးကောငျးပါတယျ။ အားလုံးမပိတျဘဲ အဲ့လောကျမှာ ထိနျးနိုငျတယျဆို အရမျးအောငျမွငျတယျလို့ပွောလို့ရပါတယျ။ ၃၀၀-၄၀၀ ကွားဆိုတာ သှေးလနျ့ရမယျ့ အခွအေနမေဟုတျပါဘူး။ ဘာမှ ကွီးကွီးကယျြကယျြမပိတျဘဲ အဲ့လောကျမှာ နနေိုငျရငျ အောငျမွငျပါတယျ။
ကွောကျတဲ့သူမြား ကိုယျ့ဟာကိုယျဆငျခွငျပါ။ မထှကျမဖွဈ မလုပျမဖွဈလုပျနရေတဲ့သူတှကေို အပွဈမတငျပါနဲ့။ သငျတို့ နစေ့ဉျစားနတေဲ့ အစားအစာတှေ သငျတို့ဆီရောကျအောငျ လုပျပေးနသေူမရှိဘဲ ပိုကျဆံရှိရငျတောငျ နစေ့ဉျ ဘယျသူမှ စားနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။ကွောကျရငျ ဆငျခွငျရမယျ့ နညျးလမျးတှထေဲ အရေးအကွီးဆုံးက ဘာလဲ? Social Distancing ပါပဲ။ ဖွဈနိုငျရငျ ဘယျသူ့နားမှ မကပျပါနဲ့ ဝေးဝေးကသာ စကားပွောပါ။ လူထူရငျမသှားပါနဲ့။ ဖွဈနိုငျရငျ အိမျက လုပျပါ၊ ဖုနျးနဲ့လုပျပါ၊ အငျတာနကျပျေါကလုပျပါ။
ဒုတိယက နှာခေါငျးကို မပှတျဖို့ သတိထားဖို့ပါ။ တုတျကှေးအမြားစုဟာ နှာခေါငျးကို ပှတျရာက စတာခညျြးပါပဲ။ ယားမယျ ပှတျမယျ အဲ့ကနေ နှာတှပေူ မကျြလုံးတှေ ပူလာမယျ။ ဒီတော့ ယားရငျ တဈသြှူးအသဈနဲ့ အသာအယာသုတျပါ လကျဗလာနဲ့ မနှိုကျ မပှတျပါနဲ့။ လူကွီးတှမှော နှာခေါငျးယားတတျရငျ နှာခေါငျးထဲက အမှေး အရမျးရှညျပွီး နံရံထောကျတာ အပွငျထှကျနတောကွောငျ့ဖွဈတတျပါတယျ၊ နညျးနညျးညှပျပေးပါ။
လူအမြားအတငျးလုပျခိုငျးနတေဲ့ Mask ဟာ အရေးအကွီးဆုံးမဟုတျပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အကွောငျးအမြားကွီးပါ
၁၊ Mask တပျပုံ ခြှတျပုံ မှနျဖို့လိုတာပါ၊ တပျတဲ့အခါမှာ နှာခေါငျးပွားကို စိနအေောငျဖိဖို့လိုပွီး သူ့ကနေ လမေဝငျဖို့လိုပါတယျ။ အဲ့လိုဖွဈဖို့က နှာခေါငျးပွားကောငျးဖို့ လိုသလို နားသိုငျးကွိုး အရမျးခြောငျနလေို့မရပါဘူး။ Mask ရဲ့သဘောတရားက အမွဲတပျပွီး ခြှတျတာနဲ့ ပဈရတာမြိုးပါ။ လြှျောသုံးလို့ရတဲ့ Mask ဆို ခြှတျတာနဲ့ ဆပျပွာရညျထဲ တနျးထညျ့ရမှာပါ။
တပျထားတုနျးမှာ မေးစဆှေဲ့ခထြားလို့မရသလို Mask ရဲ့ နားသိုငျးကွိုးက မကိုငျဘဲ အရှကေ့ကိုငျပွီး ဆှဲခလြိုကျ ပွနျတငျလိုကျ လုပျလို့လဲ မရပါဘူး။ ဘယျလိုဖွုတျမလဲဆို နားသိုငျးကွိုးကိုပဲ ကိုငျဖွုတျရပါမယျ။ တခွားနရောတှကေို လုံးဝမထိရပါ။ ဒီတော့ လုံးဝမနနေိုငျလို့ ခဏဖွုတျခငျြရငျ မေးစဆှေဲ့မခပြါနဲ့ နားသိုငျးကွိုးကဖွုတျပွီး အသာ ကိုငျထားပါ။ Mask အတှငျးပိုငျးကို သူမြားရဲ့ လတှေေ တတျနိုငျသလောကျမထိအောငျထားပါ။
၂၊ Mask ရဲ့ ကှာလတီပါ။ဘယျလိုကှာလတီသုံးလဲပျေါမူတညျပွီး ဘယျလောကျနီးရငျ ကာနိုငျမလဲဆိုတာ မတူပါဘူး။ N95 ကို သခြောတပျထားရငျ ကပျပွီး ခြောငျးဆိုးတာတောငျ ကာနိုငျပမေယျ့ ထှငျးဖေါကျမွငျတဲ့ တဈလှာ နှဈလှာတှဆေို ၃ ပေ တောငျ ကာနိုငျပါ့မလား မသခြောပါ။
၃၊ Mask ကွာကွာတပျနိုငျခြိနျပါ၊ လူတဈယောကျနဲ့ တဈယောကျမတူသလို ရာသီဥတုပူရငျလဲ အမွဲတပျထားဖို့ ဖွဈနိုငျပါ့မလား စဉျးစားဖို့လိုပါတယျ။ တပျဖူးသူတိုငျးသိတဲ့ ကိစ်စပါ။ မခံနိုငျရငျ ခြှတျလိုကျ တပျလိုကျ လုပျနတောနဲ့ အပွညျ့အဝမလုံတဲ့အပွငျ ပိုဆိုးသှားနိုငျပါတယျ။
၄၊ Mask ကုနျကစြရိတျပါ။ တဈရကျနှဈရကျမသိသာပမေယျ့ ကှာလတီကောငျးသုံးမယျဆို တဈနေ့ တဈခုတောငျ ရရှေညျမလှယျပါဘူး။ဒီအခကျြတှကွေောငျ့ မကူးခငျြရငျ Mask ထကျပိုလုပျလို့လှယျတာ အပျေါက ၂ ခကျြပါ။ အဲ့ ၂ ခကျြကို မရှောငျနိုငျပဲ လုပျရတော့မယျဆိုရငျ Mask ကိုသုံးပါ။နောကျဆုံးအခကျြကတော့ လကျဆေးတာပါ။ လကျဆေးတာထကျ တတျနိုငျသလောကျ လူအမြားသုံးပစ်စညျးတှေ မကိုငျတာ ပိုကောငျးပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ နရေောငျရတဲ့နရောထကျ နရေောငျမထိတဲ့နရောတှေ အဲကှနျးခနျးထဲက ပစ်စညျးတှကေို သတိထားပါ။
အပျေါမှာပွောခဲ့သလိုပါပဲ။ စားဝတျနရေေးအတှကျ လူတှေ အလုပျလုပျနဖေို့လိုပါတယျ။ သငျဝယျနိုငျရငျတောငျ ဝယျစရာပစ်စညျး သငျ့ပတျဝနျးကငျြမှာမရှိတော့ရငျ၊ ထှကျတဲ့နရောက သငျ့ဆီပို့ပေးမယျ့သူ မရှိတော့ရငျ ဒုက်ခမြားမှာပါ။ဒီသဘောလေးကို နားလညျရငျ လူတှေ ကိုဗဈနဲ့ မြှတစှါ ယှဉျတှဲနထေိုငျနိုငျမှာပါ။ ဒီမိုကရစေီစံနှုနျးအရ ကွောကျတတျသူရော မကွောကျတတျသူရော အားလုံး အဆငျပွကွေပါစေ